> Resource> iTunes> otú nyefee Music si iTunes ka iPod
Ọ bụrụ na ị na enwetatụbeghị a ika-ọhụrụ iPod, na-eme ka ọtụtụ n'ime ya, ị ga-achọ ịmata otú nyefee music si iTunes ka iPod. N'ezie, usoro nke-ebufe music si iTunes ka iPod dị nnọọ mfe. Nnọọ na-eso ndị dị mfe nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú ime ya.
Nzọụkwụ 1 Gbaa iTunes na kọmputa gị
Download na wụnye iTunes na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị arụnyere ugbua, biko jide n'aka na ọ bụ nke ọhụrụ version. Bụrụ na ọ bụghị, biko imelite ya. Ma, ọ nwere ike ghara ịbụ were were nyefee songs si iTunes ka iPod.
Nzọụkwụ 2 Tinye songs gị iTunes
Ọ bụrụ na ị mbubata songs site na kọmputa gị iTunes Library, ị kwesịrị ị na tinye songs ka iTunes mbụ. Pịa obere menu na akara ngosi na n'elu aka ekpe nke iTunes iji họrọ Tinye File ka Library. Na mgbe ahụ a window ga-apụta, na-ekwe ka ị na-agagharị songs na kọmputa gị ma tinye ha gị iTunes Library.
Nzọụkwụ 3 Jikọọ gị iPod gị na kọmputa
Pịa menu na akara ngosi na nnọọ n'elu aka ekpe nke iTunes window ma họrọ Gosi NchNhr Bar. Wee pịa View submenu iji họrọ Gosi sidebar. Ọ na-eme ya nnọọ mfe n'ihi na ị nyefee music si iTunes ka iPod mgbe sidebar bụ na visual. Jikọọ gị iPod gị na kọmputa. Ọ ga-apụta n'okpuru NGWAỌRỤ na sidebar.
Nzọụkwụ 4 Nyefee Music si iTunes ka iPod
Pịa gị iPod n'okpuru Ngwaọrụ. N'akụkụ aka nri nke Ohere, pịa Music. Na mgbe ahụ ego nhọrọ mmekọrịta Music. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee niile songs si iTunes gị iPod, ị ga-ahọrọ Niile Music n'ọbá akwụkwọ. Bụrụ na ọ bụghị, họrọ họrọ listi ọkpụkpọ, isiokwu, albums, na Genres. Pịa Mee ka mepụta iTunes music ka iPod ebufe usoro.
Ọ bụ ya! Nke a bụ otú nyefee music si iTunes ka iPod. Ọ bụ ihe kasị ọtụtụ ebe ada ụzọ. Otú ọ dị, ọ na-achọ ka ị na-ejikọ gị iPod na otu kọmputa. Mgbe ị na-agbalị nyefee music si iTunes ka iPod si ọzọ kọmputa, media faịlụ, gụnyere songs na gị iPod ga-ehichapu ya. Mgbe ị na-ezute ọnọdụ, biko kwụsị syncing na-agbalị Wondershare TunesGo. Ọ ga-enyere gị idetuo music site na kọmputa na-iPod ozugbo.
Import Music ka iPod enweghị erasing iPod:
All-na-otu ngwá ọrụ na-Nyefe ọ bụla song ọ bụla na kọmputa ọ bụla iPod enweghị ikpochapụ iPod. Ọ na-eme òkè songs n'etiti na kọmputa na iPod nke ukwuu mfe. Mụtakwuo >>
Olee otú Tinye listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPod
Top iPod ka iTunes Nyefee Software
Atụmatụ & Aghụghọ wughachi iTunes Library